Print Page - Su'aal: Waxaa Rabaa inaa dheeraado?
Diseases and Conditions => Qaybta Su'aalaha => Topic started by: Hanad Ahmed on December 22, 2018, 06:28:49 PM
Title: Su'aal: Waxaa Rabaa inaa dheeraado?
Post by: Hanad Ahmed on December 22, 2018, 06:28:49 PM
Asc SomaliDoc waad ku Mahadsantihin sida Aa mar walba Bulshada ugu shaqeysaan
waxaa qabaa su'aal?
waxaan ahaye wiil dhalinyaro ah waxana jira 21 dadeyda iyo muuqalkega isma la eko oo waxaa ahaye qof saaid u gaban familkan waxa dhaxal ah uma lahan Marka maxaa sameyaa oo aa ku dheeran karaamana laga yaaba inaa dheerado 21 jir ka dib daawoyin ama cunto la cuno oo lagu dheeranayo maa jira sido waxaa saaid u isticmala Siigadad malaga yaaba in siigada ee ii keentey Gabnida iyo Muuqaal yarid
Title: Re: Su'aal: Waxaa Rabaa inaa dheeraado?
Post by: SomaliDoc on April 22, 2019, 08:18:25 PM
Qoraalkaan ka akhriso waxyaabaha xiriirka la leh gaabnida iyo dhirirka qofka, da'da uu dhirirka istaago iyo talooyin kalaba: http://somalidoc.com/smf/index.php?topic=6490.0 (http://somalidoc.com/smf/index.php?topic=6490.0)
Siigeysiga ma keento inaad gaabnaatid, laakiin cillado kale ayay sababtaa, taasi faahfaahinteedane ka akhriso qoraalkaan: http://somalidoc.com/smf/index.php?topic=2209.0 (http://somalidoc.com/smf/index.php?topic=2209.0)